HPC199 AI Miiska gawaaridawaa tirinta gawaarida tirisa gawaarida soo socota iyo kuwa baxaya. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu tiriyo walxo kale ama waxaa loo isticmaali karaa dadka tirinaya. Qaar badan oo naga mid ahMiiska gawaarida waa alaab shati leh. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan ku saabsanMiiska gawaarida.
HPC199 AI Miiska gawaarida wuxuu leeyahay qalab ku shaqeeya AI, oo si madaxbanaan u dhameystiri kara raadinta bartilmaameedka, tirinta aqoonsiga, iyo xakamaynta. Waxaa loo isticmaali karaa xakamaynta ka hortagga shiil, tirinta gawaarida, xakamaynta ciriiriga, maaraynta aagga iyo xaalado kale. Waxaa sidoo kale lagu dhex dari karaa astaamaha duubista cajaladaha fiidiyowga ah ee loo yaqaan 'DVR Hard Diskord Records' si ay u bixiyaan fiidiyow qeexitaan sare ah Ujeeddo badan iyo wax-qabad badan oo wax-tirinta ah oo leh hawsha kormeerka, HPC199 AIMiiska gawaarida waxaa loo isticmaali karaa internetka ama kaligiis istaagi karaa, sidoo kale waxay ku siin kartaa xalal xakamaynta amniga caqli dalxiiska ganacsiga, tafaariiqda, beeraha nasashada, bangiyada, gaadiidka wadada iyo warshadaha kale.
HPC199 AI Miiska gawaarida wuxuu dhexgalaa shaqada tirakoobka taraafikada, taas oo uusan saameyn xagasha muuqaalka.
Bedka ugu sarreeya ee aragtida wuxuu dabooli karaa ilaa 20 mitir. Waxay la socon kartaa 50 bartilmaameed isla waqti isku mid ah.
Tirinta gawaarida waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo aagagga loo habeeyay iyo jihada tirinta bartilmaameedka.
Kaliya hal A HPC199 miiska gawaarida gaari kara tirakoobyo gaar ah oo ku saabsan gawaarida soo socota iyo kuwa baxaya.
HPC199 AI Miiska gawaaridawuxuu qaataa IP65 naqshadeynta biyuhu, kaas oo ku fulin kara tirinta gawaarida si isku mid ah sax ah xitaa marka dibedda lagu isticmaalo. HPC199 AI Vecounter hicle waxay taageertaa rakibidda xagal kasta, iyo suurtogalnimada in lagu waxyeeleeyo iftiinka dambe, iftiinka dambe ama qorraxdu aad ayey u hooseysaa. Waxay si otomaatig ah u sifeyn kartaa saameynta hooska hadhsan Waxay u isticmaashaa dareemayaal sawir aad u xasaasi ah xitaa habeenkii oo leh iftiin jawi daciif ah. Tirakoobka tirinta gawaarida caadiga ah. Marka HPC199 AIMiiska gawaarida si sax ah uma aqoonsan karo bartilmaameedka xagal gaar ah, barashada bartilmaameedka iyo tababarka waxaa loo isticmaali karaa in lagu kordhiyo muunada bartilmaameedka si loo wanaajiyo heerka aqoonsiga.
Shaqada tirinta gawaarida ee HPC199
1. Maareynta isticmaaleyaasha shabakadda, isku xirnaanta waqtiga shabakadda, taageeridda kormeerka waqtiga dhabta ah ee fog.
2. Taageer dhimista buuqa dhijitaalka ah ee 3D, sawirku wuu cad yahay oo ka jilicsan yahay.
3. 1 RJ45 interface, 1 DC12V interface, 1 interface xiriir adag, 1 RS485 interface.
4. Taageerada borotokoolka ONVIF, hab maamuuska heerka qaran ee G28181.
5. Taageerida ogaanshaha qulqulka rakaabka, ogaanshaha socodka gaariga, xakamaynta aaga taageerada, socodka rakaabka iyo socodka isku dhafka gawaarida.
6. Taageer dib-u-shaqeynta dib-u-dhiska otomaatigga ka dib koronto la'aan / fashilaad lama filaan ah.
7. Taageerida superposition dabeecadda, booska superposition lagu hagaajin karo iyo midabka tooska ah ee muujinta midabka.
8. Naqshadeynta darajada Warshadaha, qaab dhismeedka fudud, saxsanaanta sare iyo xasilloonida adag.
9. Taageer is-beddelka tooska ah ee miirayaasha si loo ogaado kormeerka habeen iyo maalinba, taageer kormeerka taleefanka gacanta; Awood koronto POE (ikhtiyaari)
10. Taageerida ogaanshaha dhaqdhaqaaqa shaashadda / qarinta shaashadda, 4 aagag lagu ogaanayo iyo 4 aag goos goos ah ayaa la dejin karaa.
11. Isticmaaluhu wuxuu dooran karaa qulqulka koodhka wuxuuna hagaajin karaa heerka jir, xallinta, iyo tayada fiidiyowga.
Adabtarada awoodda DC12V
Binuclear ARM kiliyaha A53 1.5GHz 32KBI-cache
SONY IMX, 1 / 1.8 "Sawirka Horusocodka ah ee CMOS
Iftiiminta ugu yar
0.1 Lux (jawiga Streetlight habeenkii)
10-30 jir / labaad
Durdurka weyn 3840 × 2160 Sub durdur 1280 × 720
Kala soocida astaamaha gaariga
Bas / gaari xamuul / gaari / mooto (saddex-baaskiil) / baaskiil
Maareynta barnaamijka softiweerka
Dekedda network, dekedda 485
HPC199 AI fiidiyowga miisaanka taraafikada ee tirinta gawaarida
Waxaan leenahay noocyo badan oo IR ah Miiska gawaarida, 2D, 3D, AI Miiska gawaarida, had iyo jeer waxaa jira mid adiga kugu habboon, fadlan nala soo xiriir, waxaan kugula talin doonnaa midka ugu habboon Miiska gawaarida adiga 24 saac gudahood.
Hore: MRB AI waxay ka hortageysaa HPC198
Xiga: MRB madaxa tirinta kamarada HPC010
3d Kaamiro tirinta
3d Dadka Tirsan
MRB 3D nidaamka tirinta dadka HPC009
MRB madaxa tirinta kamarada HPC010
MRB AI waxay ka hortageysaa HPC198